स्वास्थ्य मन्त्रालयको साढे ४४ करोड अनुदान, कुनलाई अस्पताललाई कति ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ वटा सामुदायीक अस्पताललाई पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ । मन्त्रालयलले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार सामुदायीक अस्पताललाई अनुदान दिन लागेको हो । सामुदायीक अस्पतालहरुलाई (दोश्रो..
दुई महिनादेखि शिक्षक वेपत्ता, विद्यार्थीको रिजल्ट पालेले निकाले
बाजुरा । बाजुरा जिल्लाको उत्तरी भेगको जगन्नाथको ढाडाकोटस्थित बूढीनन्दा प्रावि दुई महिनादेखि सुनसान बन्दै गएको छ । चैत दोस्रो साता नै हतारहतारमा परीक्षा सकेर हिँडेका सबै शिक्षकको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन..
चुरोट-खैनीको खोलमा अबदेखि सन्देशमूलक चित्र पुरै छाप्नुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले सन् २०१८ बाट सम्पूर्ण धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा शतप्रतिशत सन्देशमूलक छाप्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागेको छ । आजदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली..
​अब कूक, वेल्डर, कार्पेन्ट्री, प्लम्बर लगायतका तालिममा एकवर्षे कोर्स
भक्तपुर । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले कूक, वेल्डर, कार्पेन्ट्री, प्लम्बरलगायतका छोटो अवधिको प्राविधिक शिक्षालाई एकवर्षे बनाउने भएको छ । सीटीईभीटीले गरेको व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रोफेसनल कोर्स) निर्माण तथा..
प्राधिकरणले एसएलसी परीक्षा अवधिभर कतै लोडसेडिङ नगर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसएलसी) परीक्षाभर देशरभर लोडसेडिङ नगर्ने भएको छ । चैत १ देखि १४ गतेसम्म विहान बेलुकाको पिक आवरमा लोडसेडिङ नगर्ने गरी तयारी..
‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’का लागि बीस अर्ब ऋण आउने
काठमाडौँ, सरकारले ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (एसएसडिपी) का लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २० अर्ब रुपैयाँ ऋण ग्रहण गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो ऋणका सम्बन्धमा वार्ता गर्न एक..
विद्यालयलाई एक दम्पतीद्धारा रु ३० लाखको जग्गादान
म्याग्दी । बेनी नगरपालिका–१३ तातोपानीमा रहेको सरस्वती माविलाई एक दम्पतीले रु ३० लाख मूल्य बराबरको जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । विद्यालयको शैक्षिक एवम् भौतिक विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले गत..
चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बीचमा हेटौँडामा भर्नाका विषयमा चुलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि नै दुई..
काठमाडौं । नेपालको जनसङ्ख्यालाई चाहिनेभन्दा वार्षिक सात हजार बढी स्टाफ नर्स उत्पादन हुने गरेका छन्। उत्पादन भएका नर्सको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वयम्सेवक ‘भोलेन्टियर’, रोजगारी र पेसागत सुरक्षालगायतका विभिन्न समस्या देखिँदै आएको..
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा पन्त नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा राजेन्द्र पन्त नियुक्त भएका छन् । बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा पन्तलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको मन्त्रीका..
काठमाडौँ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण सुधार परियोजनाका लागि ६९ करोड २० लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने सहमति गरेको छ । उक्त सहमति..
काठमाडौं । कक्षा एघारको परीक्षामा ५१ दशमलव ७१ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार साँझ परीक्षाफल सार्बजनिक गरेको छ । र, नतिजा अनुसार १ लाख ३७ हजार..
१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमडौं । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको..
​चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने नेपाल विश्वमै पहिलो
काठमाडौँ । सुर्तीजन्य पदार्थमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पहिलो स्थानमा परेको छ । क्यानेडियन क्यान्सर सोसाइटीले सुर्तीजन्य पदार्थमा ‘चेतावनीमूलक सन्देश’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि विश्व स्वास्थ्य..
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ६ खर्ब ४६ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ९एसएसडीपी०का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ..
अब सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल हुने
काठमाडौँ । अब सरकारी अस्पतालमा आफ्नो छुट्टै फार्मेसी औषधि पसल सञ्चालनमा आउने भएको छ, गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अस्पताल आफैँले फार्मेसी सञ्चालनका लागि छुट्टै बजेट..
काठमाडौं । शुल्क पुनरावलोकन समितिले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलले तोक्ने सिट संख्याका आधारमा एमबीबीएसको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समितिले अधिकतम १ सय, १ सय..
एक जना विद्यार्थीको वार्षीक खर्च १८ हजार
काठमाडौं । एक जना विद्यार्थीका लागि वार्षीक सरदर १८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकार, गैरसरकारी संस्था, दातृ निकाय र अभिभावकले पूर्वप्राथमिकदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्म गर्दै आएको लगानीका आधारमा..
​नेपाल औषधि लिमिटेडले ४८ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने
काठमाडौँ । करिब सात वर्षदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिडेट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो..
​ १२ कक्षाको परिक्षाफल प्रकाशित, नियमित तर्फ ४८.१७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को सबै संकायको परिक्षाफल सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रक सन्तोष अर्यालका अनुसार १२ कक्षाको नियमित तर्फ ४८.१७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका..
​स्नातकोत्तर र बिएएलएलबीको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौँ । त्रिवि, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुद्वारा २०७३ साल वैशाख÷जेठमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्ष २०७२ नियमितको समाजशास्त्र र मानवशास्त्र विषयको परीक्षाफल केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको..
नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । शिक्षा ऐन जारी भएसँगै नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन गर्नु पर्ने भए पनि तत्कालका लागि उक्त प्रावधान लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शिक्षा..
​अब नेपालमै हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पढाइ हुने
काठमाडौँ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलोपटक हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पठन पाठन सुरु गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयले आगामी कात्तिक २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, सुर्खेतबाट अध्ययन अध्यापन सुरु गराउने जनाएको छ । त्यसका..
​स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको परीक्षाफल प्रकाशित
काठमाडौँ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा २०७३ वैशाखरजेठमा सञ्चालित मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर तह प्रथम वर्षको ग्रामीण विकास विषयको परीक्षाको परीक्षाफल आज प्रकाशित गरिएको छ । परीक्षाफल www.educationsansar.com,..
कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित, ७३.७७ प्रतिशत उर्तिण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनइबी) ले कक्षा १२ को विज्ञान र संस्कृत विषयको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार बेलुकी बसेको बोर्डको परीक्षा समितिको बैठकले उक्त नतिजा सार्वजनिक..
काठमाडौं ।आफैँले ल्याएको निर्देशिकालाई छलेर सरकारले पहुँचका आधारमा संघसंस्था तथा अस्पताललाई बाँड्न बजेटमै करोडौँ रकम छुट्याएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल र संघसंस्थालाई बाँड्नका लागि सरकारले ३२ करोड २८ लाख..
काडमाडौं । विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ । विदेश अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट एक वर्षमा साढे ३२ हजार विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ९एनओसी०..
काठमाडौं । एनसेलको सहयोगमा टिचिङ हस्पिटलमा डे केयर डायलाइसिस सेन्टर निर्माण भएको छ । यसले टिचिङ हस्पिटललाई मृगौला सम्बन्धि रोगको उपचारमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छ । मृगौला सम्बन्धि स्वास्थ्य समस्या दिनानुदिन..
सरकारले भनेको भन्दा धेरै दूध पिउँछन् नेपाली
काठमाडौं । प्रत्येक नेपालीले वर्षमा औसत ६४ लिटर दूध उपभोग गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वस्थ्य रहन प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५७ लिटर उपभोग गर्नुपर्ने सरकारी मापदण्ड छ । त्यसभन्दा सात लिटर बढी..
एसएलसीमा ग्रेड प्वाइन्ट चार हासिल गर्ने समीक्षा बोर्ड फस्ट
बुटवल । रुपन्देहीको मुर्गियास्थित सुनगाभा पब्लिक उच्च माविकी विद्यार्थी समीक्षा सुवेदीले ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज ४ अंक हाँसिल गरेकी छन् । सतप्रतिशत ल्याउँदै समीक्षा 'बोर्ड फस्ट' भएको दाबी उनको स्कुल र परिवारले..
Results 222: You are at page4of 8